Nchekwa nduku: Ọ dị mma na nchekwa - Magazin Sistemu Nduku
Capex ga-enyere aka wulite ebe ọmụmụ na mkpụrụ asatọ
Digitalization nke agro-industrial mgbagwoju na-arụsi ọrụ ike na-etolite na Krasnoyarsk Territory
Droneport ga-enye gị ohere ijikwa ụgbọ elu nke quadrocopters na anya
Isi News Akụkọ ụlọ ọrụ
в Ndụmọdụ ọkachamara, News, Akụkọ ụlọ ọrụ
Ụlọ ọrụ "Mikopro" sitere na obodo sayensị nke Koltsovo emepụtala ihe ọhụrụ dị ndụ ngwaahịa iji luso nematode ọgụ. N'ihe banyere arụmọrụ na nchekwa, ngwaahịa ahụ enweghị analogues ọ bụghị naanị na Russia, kamakwa na ụwa, ebe ọ na-efu ugboro anọ dị ọnụ ala karịa "ndị asọmpi" mba ọzọ.
Nematodes bụ ikpuru parasitic microscopic. Ụdị nematodes dị iche iche na-ebute tomato, kukumba, ose, eggplant, eyịm, strawberries na ihe ọkụkụ ndị ọzọ, mana poteto na-enwe mmasị karịsịa. Site na ọrịa siri ike n'oge a na-akọ ihe na nchekwa na-esote, 70-80% nke ihe ọkụkụ na-anwụ.
Chips poteto bụ ọkacha mmasị maka azuokokoosisi nematode. Ịgba mmiri na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị ike karịsịa ma na-emepụta ọnọdụ dị mma maka mgbasa nke nje. Ihe na-akpata ọrịa ubi bụ mkpụrụ osisi merụrụ , enweghị ntụgharị ihe ọkụkụ na oge nchoputa nke ọrịa ahụ.
Ọ bụghị mgbe niile ka ọ ga-ekwe omume ịchọpụta ọrịa n'oge egwu egwu, Otú ọ dị, microdamage na tubers n'ihi ọrụ mbibi nke nematodes na ntinye nke nje ndị mba ọzọ na nje bacteria n'ime ha nwere ike iduga nkwụsị zuru ezu nke mkpụrụ n'oge nchekwa.
Ruo n'oge na-adịbeghị anya, kemịkalụ siri ike ka bụ naanị ụzọ a ga-esi lụso nematode ọgụ. Otú ọ dị, ịdị irè nke nkwadebe kemịkal ọ bụla na-ebelata kwa afọ: ụmụ ahụhụ na-emegharị ma na-eguzogide ọgwụ. Ndị ọrụ ugbo ga-abawanye dose ahụ, nke na-eduga n'ịbawanye ọnụ ahịa hectare na, ya mere, ọnụ ahịa mmepụta.
"Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ahụ abawanyeghị, nkwadebe kemịkal ga-enwe ike ibibi naanị ndị na-adịghị ike, nsogbu ọrịa ahụ ga-etokwa. Ngwaahịa sitere n'okike anyị enweghị ihe ndọghachi azụ a," Anna Mishina, onye isi Mikopro kwuru.
Egosiri ịdị irè megide nematode
N'etiti mmepe nke ndị ọkà mmụta sayensị Russia bụ ero na-eri anụ-hyphomycete, onye iro eke nke nematodes. Site n'enyemaka nke ngwaọrụ ọnyà, ero ahụ na-etolite webụ na-egbuke egbuke iji jide nje ahụ, na-abanye n'ime pesti ahụ wee gbarie ya. Ịdị irè nke ngwaahịa ndu na mbibi nke cysts na larvae nke nematodes na ala ruru 86%.
N'afọ 2019, a nwalere Nematofagin-Mikopro nke ọma n'ọhịa nke AFG National Agricultural Holding, ebe nje nematode belatara site na 25 ruo 1,5 pasent n'otu oge. N'afọ 2021, na mpaghara Novgorod, Rosselkhoznadzor welitere mgbochi iche maka nematode poteto edo edo edobere otu afọ gara aga site na ala hectare 221,4 - ọgwụ ahụ kpochapụrụ ala emetọghị site na ihe mgbochi iche. Ka ọ dị ugbu a, bionematicide gosipụtara irè ya na mpaghara 57 nke Russia.
"Nematofagin-Mikopro" bụ nsonaazụ nke afọ 20 nke nchọpụta sayensị na afọ 8 nke ule na nnukwu ubi. Ka ọ dị ugbu a, nke a bụ naanị ọgwụ iji lụso nematodes ọgụ na-ejikọta arụmọrụ na nchekwa ndu. Ọ na-enye aka melite nri nri nke osisi ma melite ogo ihe ọkụkụ.
"Anyị na-ebuga batches pilot nke bionematicide gafee Russia kemgbe 2015. N'ime oge a, anyị kwalitere nkà na ụzụ nke itinye na ịchekwa ọgwụ ahụ maka ntinye ya nke ọma na mmepụta ugbo nke oge a, natara ikike Russia na Eurasian. Ugbu a n'ime izu abụọ, anyị nwere ike ịmepụta ọgwụ ahụ na oke zuru ezu iji na-emeso hectare 12 puku, nke ya na 480 tọn kemịkalụ na-ebubata. Ọrụ anyị bụ inye ndị na-arụ ọrụ ugbo n'ime ụlọ ụzọ dị mma, nke dị mma na gburugburu ebe obibi yana ọnụ ala karịa kemịkalụ sitere na kemịkal, "Anna Mishina na-ekwu.
Nzaghachi gbasara ọgwụ
Tel.: 8 800 550 47 44
Tags: "Nematofagin-Mikopro""Mikopro"bionematicidenematode njikwa
Otu ndị ọkà mmụta sayensị, gụnyere onye nyocha sitere na Mahadum Perm Polytechnic, ewepụtala ngwugwu ngwanrọ na-enye gị ohere ijikwa usoro ịgba mmiri nke ala ubi nke ọma….
Ndị ọkà mmụta sayensị sitere na Tyumen Scientific Center nke alaka Siberia nke Russian Academy of Sciences na Tyumen State University na-amụ nduku na ala na mpaghara ugwu, na-eke ụlọ akụ Arctic ...
Ndị na-emepụta akwụkwọ nri rịọrọ ka ịgbakwunye mkpụrụ osisi iji gbochie mmachi a